Lix qodob oo ka soo baxay Shirka Golaha Wasiirrada Somaliland
Madaxweyne Muuse oo guddi-howleedyo u qabiyey Golaha Wasiirrada Xukuumaddiisa…
Hargeysa(GNA)-Shirka Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir-gudoominayey Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa lagu magacaabay guddiyo loo qaybiyey Wasaarada Xukuumadda.
Waxa kale oo shirka lagaga hadlay xaalada dalku marayo iyo dagaalkii dhawaan ka dhacay xuduudka Somaliland iyo Puntland.
War Qoraal ah oo Madaxtooyadu ka soo saartay kulanka Golaha, ayaa lagu faahfaahiyey qodobada lagaga dooday Shirkaas iyo natiijada ka soo baxday.
Warsaxaafaddeedka ayaa lagu yidhi sidan:
Qodobada ka soo baxay Shirka:
1.In dawladda Somaliland, siday horeba u sheegtay ay ka go’antahay in ay ilaalinayso xuduudaheeda, ogalaan doonnina in taako ka mida dhulka Somaliland lagu soo xadgudbo.
2. In ay dawladda Somaliland u cadaynayso Wadamada deriska ah iyo Beesha Caalamkaba, inay ka go’an tahay nabad ku wada noolaanshaha iyo ilaalinta xasiloonida mandaqadd
Previous: Q.M oo Shuruud ku xidhay wareejinta Maamulka Hawada Soomaaliya
Next: Sheeko Xigmadaysan: Ma ila socotaa..?. Q1-aad